Umzukulu ugwaze ugogo wadla izicubu | News24
Umzukulu ugwaze ugogo wadla izicubu
ISITHOMBE: sithunyelweUNkk Judith Ndlela.
“Ngicele odokotela ukuba bathathe amagazi akhe ukuze sizothola ukuthi lomuntu wayekuluphi uhlobo lwesidakamizwa.
“Akekho umuntu ongenza ngelendlela enze ngayo.Angeke kuze kube isenzo somuntu ophilayo ukuthi abulale umuntu aqede adle nezicubu zakhe. Sijabulile-ke ukuthi odokotela bavumile ukuthi bazosisiza sesilindele imiphumela.
“Sijabulile ukuthi umsolwa ugcinwe ngaphakathi.Sicabanga ukuthi lokho kuyinto elungile ngoba umphakathi ngaphandle udiniwe ngakho-ke impilo yakhe isengcupheni.Ukumgcina ezitokisini kuyinto elungile,” kubeka yena.